Nagarik Shukrabar - ‘विदेश भन्नु मात्र हो, न्वारन र पास्नीमा गीत गाउन बोलाउँछन्’
शनिबार, ३० असोज २०७८, ०५ : २७
आइतबार, १९ साउन २०७६, ११ : २४ | शुक्रवार
तीज आउन एक महिना बाँकी छँदै रक फ्लेवरको तीज गीत गाएर चर्चामा आए गायक एवं मोडल दुर्गेश थापा। करिब तीन हजार म्युजिक भिडियो गरिसकेका र २५ वटा एल्बम सार्वजनिक भइसके पनि उनलाई ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच्चबिच्चमा’ ले धेरै स्रोता र दर्शकमाझ परिचित गरायो। हिरो बन्न काठमाडौं आएका उनी कसरी गायनतिर लागे? थापासँग लोकदोहोरी र तीज गीतको सेरोफेरोमा रहेर शुक्रवारकर्मी रीना मोक्तानले गरेको अन्तरंग:
रातै लुगामा पो आउनु भयो। तीज लागिसक्या हो ?
हल्का, हल्का। ठीकै लागिरा’छ (मुसुक्क मुस्कुराउँदै)।
यसपालि त गायिकाको भन्दा तपाईंकै तीजको गीत पो चल्यो। एक महिनाअघि नै तपाईंको तीज गीत हिट भयो है ?
तीजको गीत एक महिनाअघि मात्र बज्ने हो त्यसैले चाँडै गीत निकालेको हो। लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले पनि यसपालिबाट एक महिना अगाडि मात्र तीज गीत सार्वजनिक गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। नत्र त टिभी नै रातो भइसक्थो अहिलेसम्म। गीतको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ। एक हप्तामै युट्युबमा १० लाख भ्युज कट्यो। (दंग पर्दै)
सबैले राम्रो नै भने त ?
त्यस्तै त हो नि यो फिल्डमा। ६० प्रतिशतले राम्रो लाग्यो भन्छन्, ४० प्रतिशतले नराम्रो।
तीज गीत, सबैल गाउनु भा’को छ। गीतमा केटी नराखी सिंगल गाउने मै हो। अलिकति गीतार सितार भएन भन्छन्। अझ तीज गीत प्रायः महिलाले गाउने हो, पुरुषले गाइदिँदा अलि हल्ला भइहाल्छ नि !
गायन शैली, वाद्यवादन हेभी छ। पुरुषले पनि नाच्न पाउनुपर्छ भनिएको छ। नयाँपन कि अधिकार मागेको ?
तीजमा दिदीबहिनी नाचिरहनु भएको हुन्छ। मेरो गीतले हामी पुरुषले पनि नाच्न पाउनुपर्छ भनेको हो, क्या ! पुरुष अधिकार पनि खोजेको हो।
पुरुषका लागि पनि तीज चाहियो भन्न खोजेको हो ?
महिलाहरुले पनि अधिकार खोज्नुहुन्छ। हामीले पनि त खोज्नु परिहाल्यो। महिलाले पाइन्ट, टिसर्ट लायो भनेर किन लगाको भनेर विरोध गर्न भएन नि ! जमाना परिवर्तन हुँदैछ। हामी समान हौं। त्यसैले हामीले पनि गीत गाउँछौं, तपाईंहरु नाच्नुस्। तपाईंहरु पनि गीत गाउनुस्, हामी नाच्छौं भनेको हो।
मेरो ड्याडी इण्डियन आर्मी। उहाँले मलाई पनि इण्डियन आर्मी बनाउनु भो। भर्ती नै भएँ। बनारसमा बसेँ। त्यहाँ उपल्लो तहकोले तल्ललाई एकदम हेप्ने के ! उनीहरुले त्यहाँ पात खसेछ जा टिप भनेपछि टिप्नै पर्ने अनि त्यहाँबाट भागेँ। लखनउ आएर ड्याडीलाई फोन गरेँ र भनेँ, म अब जागिर खान्नँ।
तीजमा अरु गीत आउँदैनन् ?
गाउने त यही एउटा हो। अन्य तीजको गीतमा मोडलिङको अफर आएको थियो तर खेलिनँ। यसपालि आफ्नै गीत र म्युजिक भिडियो प्रमोट गर्ने हो।
आफ्नै गीत फाप्दो रहेछ है ?
तीजमा त महिलाहरुको गीत नै बढी हुन्छ। केटाहरुले त के गर्ने, गर्ने ? त्यसैले यो गीत निकाल्देपछि जेन्सहरु नाच्न त नाच्छन् नि ! जेन्सका लागि यसपालिको मेरो गीत तीजको उपहार नै हो।
तीजमा महिला गायकको भन्दा तपाईंकै डिमाण्ड बढी हुने देखियो। कत्तिको व्यस्त छ सेड्युल ?
स्टेज प्रोगामको अफर आइरहेको छ। बाहिर जान सक्छु। नेपालमा पनि हुन सक्छु। जताजता धेरै कार्यक्रम भयो त्यतै जाने हो। सेड्युल मिलाउँदै छु।
गीत चै ‘बिच्चबिच्चमा’ नाच्नुप-यो निकाल्ने अनि कत्तिको नाचिन्छ त तीजमा ?
साथीहरुसँग नाचिन्छ। यसपालि जहाँ पुगिन्छ त्यतैका दिदीबहिनीसँग तीजमा नाच्छु।
संस्कृति जोगाउन गीत गाउने कलाकार। संस्कृतिअनुसार तीजमा दिदी–बहिनी लिन नजाने ?
दिदी बुटवल हुनुहुन्छ। बहिनी जापान। बहिनीलाई लिन जान सकिन्न। बिहे भएपछि दिदीलाई लिन जान थालेको छु। गाउँमा हामी बच्चा हुँदा, ऊ पारिबाट दिदी आयो हेर त भन्थ्यौं साथीहरुलाई। त्यही कन्सेप्ट अनुसार ‘पारि पारि आएकी रातो साडी लाएकी तीनै होली हाम्री दिदी माइता आइकी’ भनेर गीतमा शब्द राखेको हो।
पुरुषलाई पो बढी तीज लाग्न थाल्यो। तीज गीतको कन्सेप्ट कमर्सियल त होला नि, हैन ?
तीजको गीत बजिरहेको सुनेँ तर त्यत्ति इनर्जी आउने खालको थिएन। नचाउने खालको गीत बनाउन मुड चल्यो। चार दिनमै गीतको धुन बन्यो। आधा घण्टामा शब्द लेखियो। अलिअलि कमर्सियल भ्यालु पनि होला तर अब सबैको चाड समान भइसकेकाले तीजमा केटाले गीत गाउँदा फरक पर्दैन भनेर निकालेको।
तीज गीतको आफ्नै संस्कृति र महत्व छ। झ्याङझुयाङझुङझुङ भन्दा मादलको पुटुङटुङ नै मीठो हुन्थ्यो होला नि ?
सबैले मादल, मुरली हालेर गीत बनाउनु हुन्छ। मैले इलेक्ट्रिक गितार, वेस्टर्न बाजा प्रयोग गरे। अहिले वेस्टर्न खोज्छन्। उनीहरु गीत कता गइरहेको छ भन्ने सोच्दैनन्। बिटलाई ध्यान दिन्छन्। त्यसैले वेस्टर्न शैलीको तीज गीत ल्याएँ।
म्युजिक भिडियो पनि तीजमा आउने भन्दा अलि फरकै छ। कोरियन फ्लेवरबाट प्रभावित हो ?
अधिकांश गीतको म्युजिक भिडियो कि मन्दिरतिर कि पार्टी प्यालेसमा सुटिङ हुन्छन्। गेटअप पनि प्रायः उस्तै उस्तै। त्यसैले कोरियन गेटअप छानेको हो। सुटिङ पनि चाँडो गर्नुपर्ने भयो।
तीजको गीतमा अश्लीतता र विसंगती बढ्यो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। यसमा तपाईंको धारणा ?
अँ, भिडियोहरुमा अलिकति नसुहाउने हुन्छ। कतिपय हिन्दी गीतको प्रभाव देखिन्छ। म्युजिक त्यस्तै हुन्छ। गीत एकतिर हुन्छ कथा एकातिर बनाइदिन्छ। त्यस्तो भएपछि पच्दैन। कतिपयले गीत चलाउन दुईअर्थी शब्द घुसाउँछन्। अहिले बजारमा चलिरा छ नि ‘पिसाब’ लायो भन्ने। त्यो पनि तीजको गीत हो। त्यो ज्योति मगरले गाको गीत हो। मैले तीन वर्षअघि ज्योति मगरकै, ‘घण्टा बजाउँछु’ भन्ने तीज गीतमा मोडलिङ गरेको थिएँ। विकृति बढेकै हो तर सुधार पनि भइरहेको छ।
साथी–साथी मिलेर कार्यक्रम गर्छन्। २–३ सय दर्शक हुन्छन्। जस्तै कलाकारलाई पनि कसैको बच्चाको न्वारानमा पनि बोलाइदिन्छ। सानोसानो इभेन्टमा बोलाइदिन्छ के ! कसैको भात खुवाइ छ भने पनि राष्ट्रिय लेभलको कलाकार गीत गाउन गइदिन्छ। यहाँबाट हेर्दा मात्र विदेश भन्ने हो।
तीजको गीत कस्तो बन्नुपर्छ त ?
गीतको परिधि त हुँदैन। तर संदेशमूलक भए राम्रो। अहिले राम्रो गीत नै चल्दैन। मैले यो भन्दा अगाडि अनाथ बालकको विषयमा ‘बाँचे टुप्लुक्क मरे टुप्लुक’ भन्ने गाएको थिएँ। गीत चलेन। आ–आफ्नो प्याटर्न, आ–आफ्नो फ्यान हुँदोरहेछ। मेरो युट्युब च्यानलमा सेन्टी गीत हाल्यो भने जाँदै जाँदैन। हावा गीत हाले चल्छ।
कुन गीत तपाईंको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ?
मैले आफ्नो शोकले ‘मुद्दा हाल्दिन्छु’ भन्ने गीत गाएँ। त्यो गीत कसरी हिट भयो थाहै भएन। स्टेजमा एउटा गीत मात्र गाउनु भएन। एउटा मात्रै गीत भएपछि त्यही १६ पटकसम्म गाएँ। त्यही भएर अरु गीत पनि निकाल्नु प-या हो तर म आफूले आफैँलाई गायक भने भन्दिनँ। म स्टेज पर्फमर हो।
दुर्गेशले सधैँ गीतमा आफ्नो नाम जोडेर पब्लिसिटी गर्न खोजेको आरोप लाग्छ नि ?
त्यो त म गर्छु। पहिला एल्बमको कभर जान्थ्यो, फोटो जान्थ्यो। ओहो फलानोले गाएको रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। आफ्नै नाम घुसाइदिएपछि त दुर्गेशले गाको भन्ने भयो। पछिल्लो समय त गीत कसले गाको पनि थाहा हुँदैन। अब गाडीमा गीत सुन्दा गायकको नाम आउने होइन। पछिल्लो समय युट्युबमा नाम आउन थालेपछि दर्शकले चिन्नुहुन्छ। त्यही भएर हेल्लो एभ्रिबडी आई एम दुर्गेश थापा (एटिट्युड सहित) भनेको।
बलिउडमा हनी सिंहले गीतमा आफ्नो नाम घुसाउँछन्। नेपालको हनी सिंह बन्न खोजेको हो ?
त्यहाँ अरुले पनि गर्छ। हनी सिंहले अरुको चोरेको भन्न त मिलेन नि ! अब आ–आफ्नो हो। खोट लाउने ठाउँ त धेरै भइहाल्छ।
कानको टप पनि ‘डि’ अक्षरको लगाउनु भा’छ। तपाईंको गीत क्षेत्रीको छोरो नि हिरो भन्ने छ, आफूलाई हिरो नै सोच्नुहुन्छ कि क्या हो ?
अरुले पनि ‘मगरको छोरो’ भन्दै निकालिरहेको थियो। मैले पनि क्षेत्रीको धेरै जनसंख्या भएकाले बनाउँ न भनेर बनाएँ। राम्रो प्रतिक्रिया आयो। अस्ति क्षेत्री समाजले सम्मान ग-यो। यही कारणले नै म युरोप टुर गएँ।
अभिनयको भोक छ हो ?
अब मलाई रजतपटमा छिर्नु छ। आमिर खानको फ्यान हुँ। वर्षमा एउटा आफ्नै ब्यानरको फिल्म गर्ने योजना बनाउँदैछु। मेकिङ पनि राम्रै गर्ने मन छ। फिल्म बनाउन पैसा खाँचो पर्छ। पैसा कमाएर आउँछु फिल्म क्षेत्रमा।
लोकदोहोरी क्षेत्रमा कसरी प्रवेश भयो ?
मेरो दाइ वसन्त थापा यतै संघर्षरत थिए। धौलागिरी क्यासेट सेन्टरमा गएर दिनभरि बस्थ्यौं। कसैले पनि वास्ता गर्थेन। दाइ आफ्नै बाटोमा। म आफ्नै बाटोमा। डान्सबारमा काम गर्न थालेँ। कोरस डान्स गर्न थालेँ। शंकर बिसी, दिलिप रायमाझीको गीतमा साइड डान्सर भएर नाचेँ। केही म्युजिक भिडियो खेलियो, आफैँले बनाएँ पनि। पैसा मात्र डुब्यो। वसन्त दाइकै गीत ‘जूनले मात्र देख्छ’ मा काम गरेँ । त्यसपछि सेन्टी दोहोरीमा अफर आउन थाल्यो। त्यसपछि फेरि डान्सिङ गीत चल्न सुरु भयो। मलाई नाच्न नआउने। नाच्न आउँदैन यसलाई भनेर अफर कम आउन थाल्यो। त्यसपछि आफैँ गाएर, आफैँ नाचेर देखाइदिएँ। त्यसपछि डान्सिङ गीतमा पनि काम पाउन थालियो। आफू हिँड्ने बाटो आफैँ खन्नु पर्दोरहेछ भन्ने यो नौ वर्षको संघर्षले सिकायो।
सुरुमा मोडल बन्न आको कि गायक ?
गायक बन्न आको नि ! स्टुडियोमा गएँ गाउन। मिलेन भनेर निकालिदियो। अनि खुमन अधिकारीलाई गीत गाउन दिएँ। अर्को त गाउन पाइएला भनेको, त्यो पनि दिएनन्। त्यसपछि एकजना दाइले भाइ अब तिमीले भिडियो खेल्नु भन्नुभयो। अनि भिडियो खेल्न गएँ।
अहिले त डान्स पनि जम्यो। गीत पनि। रेट कति छ त ?
काठमाडौंमा बाँच्नै प-यो। गाडीमा तेल हाल्नु प-यो। एक महिनामा नै एक लाख खर्च हुन थालेको छ। म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिक ५० हजारबाट सुरु हुन्छ। स्टेज कार्यक्रमको १ लाख २० हजार। त्यस्तै त्यस्तै हो रेट।
विदेशतिर पनि खुब स्टेज कार्यक्रम हुन्छ। कस्तो छ त्यताको माहोल ?
आफू पनि परियो कि क्यहाे त्यस्तैमा ?
म परेँ अस्ति (लजाउँदै)। बेल्जियममा कार्यक्रम थियो। एकजना कमेडी दाइले जामजाम भन्नु भयो। मैले पैसा मात्र हेर्न भएन नि, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पनि हेर्नुप-यो भनेँ। उहाँले हान्दिम हान्दिम भाइ भन्नु भयो। गएर गीत गाइदिएँ।
कार्यक्रम के थियो ?
त्यही बच्चाको भात खुवाइ (हाँस्दै)।
यो त कलाकारको अपमानै भयो नि हैन ?
त्यही त। अब यहाँबाट जति खोके पनि त्यहाँ जाने त्यही हो। जति नै आफूलाई मैँ हुँ भन्ने कलाकार त्यस्तो कार्यक्रममा गइरहेका हुन्छन्। मलाई ६ महिनाको भिजा दियो। म त २२ दिनमै फर्कें।